Home News Shirkii golaha wasiiradda oo hadda ka socda Garowe, Maxaa looga hadlayaa?
Shirkii golaha wasiiradda oo hadda ka socda Garowe, Maxaa looga hadlayaa?
Shirkii golaha wasiiraada ee dhibka badan laga maray in uu ka furmo puntland ayaa goor draw ka furma. kulankaan oo ay ku kulamayaan labada dhinac ayaa ajandaha looga handalayo ee la shaaciyay waxaa ka mida:
1. In kaalmada lagu helay magaca Soomaaliya aan lagu qeybin Habka 4.5 ama saami-Siman
2. In baahiyaha Garoomada caalamiga ah aysan ula sinaan cidna, Gaar ahaan Ardayda deeqaha waxbarashada iyo agabyada Duulimaadyada ama Garoomada
3. In la hirgaliyo Saanada Milateri ee Puntland ku leedahay kaalmada Milateri ee lasiiyo heer Fedetaal
4. 34Milion oo kamid ah deeqaha lacagaha cadaanka ah ee Carabtu bixisay lasiiyo Garacad iyo Wadada Ceerigaabo
5. In dibu eegista Dastuurka kulankiisa u danbeeya lagu qabto Garoowe oo dibu eegistu noqoto mid aysan cidna go’aankeeda laheyn
6. In wada hadalada DF iyo Sland ay xubno kuyaalato Puntland
7. In gobalada Sool, Sanaag iyo Cayn ay noqdaan kuwa lagu xaqiijiyo Shirka wasiiradda in lagu soo duulay.
8. Doorashada 2020ka in aysan noqon nidaamyadii Dad-ban iyo 4.5
Previous articleMW Farmaajo oo qadka telafanka kula hadlay salaadiinta Puntland: Ceeybtayda astura walaalayaal!
Next articleSalaadiinta Puntland: “..wiilkaa madaxa yar yaanu naga bur-burin dowladii 20ka sano aanu soo dhisaynay”
Al-shabaab oo weerar gaadmo ah ku qaaday Ciidamada Dowlada Iyo Amisom
Magaalooyin Waa weeyn oo dalka Ethiopia ku yaala oo laga cabsi...